Storm radar: ihe ọ bụ, ihe ọ bụ maka na mkpa | Meteorology netwọkụ
Oké ifufe radar
Portillo nke German | 03/01/2022 09:47 | Ihe gbasara ihu igwe
N'oge a, ekele maka nkà na ụzụ a na-emepụta kwa ụbọchị, mmadụ nwere ike ịkọ ihu igwe n'ụzọ ziri ezi na nkenke. Otu n'ime ngwaọrụ teknụzụ iji mee amụma ihu igwe bụ oké ifufe radar. Dị ka aha ya na-egosi, ọ nwere ike inyere anyị aka ịkọ oke ígwé ojii na ọ naghị akwụsi ike nke ga-akpatara oké ifufe.
N'isiokwu a, anyị ga-akọwa ihe niile ị chọrọ ịma banyere oké ifufe radar, ihe bụ àgwà ya na uru.
1 Gịnị bụ oké ifufe radar
2 Kedu ka Storm Radar si arụ ọrụ
3 Akụkọ na ngwa nke gara aga
4 Mkpa na nhazi ụgbọ elu
Gịnị bụ oké ifufe radar
Rada oké ifufe bụ nnukwu ngwá ọrụ nwere ụlọ elu 5 ruo 10 mita n'ịdị elu nwere dome dị okirikiri kpuchie na ọcha. Enwere ọtụtụ ihe (antennas, switches, transmitters, receivers ...) nke mebere radar nke dome a n'onwe ya.
Sekit ndị na-arụ ọrụ radar na-enye ohere ịkọ nkesa na ike mmiri ozuzo, ma n'ụdị siri ike (snow ma ọ bụ akụ mmiri igwe) ma ọ bụ na mmiri mmiri (mmiri ozuzo). Nke a dị mkpa maka nleba anya na nleba anya meteorological, ọkachasị n'ọnọdụ ndị siri ike, dị ka oke mmiri ozuzo ma ọ bụ oke mmiri ozuzo, ebe enwere nnukwu mmiri ozuzo siri ike ma kwụ ọtọ, ya bụ, mgbe oke mmiri ozuzo na-agbakọ n'otu ebe n'otu ebe. obere oge.
Kedu ka Storm Radar si arụ ọrụ
Ụkpụrụ na-arụ ọrụ nke radar oké ifufe na-adabere na mwepụta nke ụzarị radieshon ụdị ngwa ndakwa nri. Ibe ndị a ma ọ bụ pulses nke radieshon na-aga n'ikuku n'ụdị ọtụtụ lobes. Mgbe ụbụrụ ahụ na-ezute ihe mgbochi, akụkụ nke radieshon na-ekpochapụ na-agbasasị (na-agbasasị) n'akụkụ niile na akụkụ na-egosipụta n'akụkụ niile. Akụkụ nke radieshon na-egosipụta ma gbasaa na ntụziaka nke radar bụ mgbama ikpeazụ ị nwetara.
Usoro a gụnyere iduzi ọtụtụ pulses nke radieshon, nke mbụ site n'itinye antenna radar n'otu akụkụ elu. Ozugbo etinyere akụkụ elu nke antenna ahụ, ọ ga-amalite ịtụgharị. Mgbe antenna na-agbagharị n'onwe ya, ọ na-ekupụta ụzarị ọkụ.
Mgbe antenna mechara njem ya, a na-eme otu usoro ahụ iji bulie antenna ahụ n'otu akụkụ, na ihe ndị ọzọ, iji nweta ọnụ ọgụgụ nke elu elu. Nke a bụ otú ị ga-esi nweta ihe a na-akpọ polar radar data - nchịkọta data radar dị n'ala na elu na mbara igwe.
Nsonaazụ nke usoro dum A na-akpọ ya nyocha oghere na-ewe ihe dịka nkeji iri iji mechaa. Ihe e ji mara nke ikuku radieshon na-agbapụta bụ na ha ga-enwerịrị ike dị ukwuu, n'ihi na ọtụtụ n'ime ike ndị a na-emepụta na-efunahụ ma ọ bụ naanị obere akụkụ nke mgbaàmà na-enweta.
Nyocha oghere ọ bụla na-ewepụta onyonyo, nke a ga-edozirịrị tupu enwee ike iji ya. Nhazi ihe onyonyo a na-agụnye ndozi dị iche iche, gụnyere mwepụ nke ala na-emepụta akara ụgha, ya bụ, iwepụ ugwu na-emepụta akara ụgha. Site na usoro dum akọwara n'elu, a na-emepụta ihe oyiyi nke na-egosi mpaghara ntụgharị uche nke radar. Ntụgharị uche bụ ihe nlebanyere oke ntinye ike electromagnetic na radar site na ntapu ọ bụla.
Akụkọ na ngwa nke gara aga
Tupu e mepụta radar mmiri ozuzo, a na-agbakọ amụma ihu igwe site na iji mgbakọ na mwepụ, ndị na-ahụ maka ihu igwe nwere ike iji nha nhata mgbakọ na mwepụ kọwaa ihu igwe. N'afọ ndị 1940, a na-eji radar hụ ndị iro na Agha Ụwa nke Abụọ; ndị radar ndị a na-achọpụtakarị akara ndị a na-amaghị, nke bụ ihe anyị na-akpọ Yufeng ugbu a. Mgbe agha ahụ gasịrị, ndị ọkà mmụta sayensị ghọtara ngwaọrụ ahụ wee gbanwee ya ka ọ bụrụ ihe anyị maara ugbu a dị ka mmiri ozuzo na / ma ọ bụ mmiri ozuzo radar.
Storm radar bụ mgbanwe na meteorology: pna-enye ohere ka nnukwu ụlọ ọrụ meteorological nweta ozi maka ịkọ amụma, Na ị nwekwara ike ịghọta n'ọdịnihu ihe mgbagwoju anya nke igwe ojii, yana ụzọ ya na ọdịdị ya. , Ọnụego na ihe gbasara nke puru omume nke ime ka mmiri ozuzo.
Nkọwa nke amụma amụma nke radar ọdịda na-enye mgbagwoju anya, n'ihi na ọ bụ ezie na ọ bụ ọganihu na mpaghara meteorological, radar adịghị enye nkọwa kpọmkwem banyere ebe dị anya, ọ na-esikwa ike ịmata kpọmkwem ebe ihu igwe ihu igwe. Nke a bụ asụsụ a na-asụ.
Iji mee amụma ziri ezi, ndị na-ahụ maka ihu igwe na-enyocha mmegharị ga-ekwe omume. Mgbe ìhè anyanwụ na-adaba n'ígwé ojii, ugboro nke ebili mmiri electromagnetic na-apụta na radar na-agbanwe, na-enye anyị ohere ịghọta njirimara nke mmiri ozuzo nwere ike ime.
Ọ bụrụ na mgbanwe ahụ dị mma, n'ihu na-abịaru nso na ohere nke mmiri ozuzo ga-abawanye; ma ọ bụghị ya, ọ bụrụ na mgbanwe ahụ adịghị mma, n'ihu ga-alaghachi azụ na ohere nke mmiri ozuzo ga-ebelata. Mgbe a na-ebufe ozi niile sitere na radar na onyonyo kọmputa, a ga-ekewa n'ihu mmiri ozuzo dị ka oke mmiri ozuzo, mmiri ozuzo ma ọ bụ snow si dị ... A na-ekenye usoro agba site na-acha uhie uhie na-acha anụnụ anụnụ dịka ike nke mmiri ozuzo si dị. .
Mkpa na nhazi ụgbọ elu
Ihe mbụ ị ga-ekwu bụ na radar ihu igwe bụ ngwá ọrụ nlele, ọ bụghị ngwá ọrụ amụma, ya mere ọ na-egosi anyị. ọnọdụ mmiri ozuzo (sweep) mgbe anakọtara data.
Otú ọ dị, site n'ịhụ ka nnukwu mmiri ozuzo si emepụta oge, anyị nwere ike "ịkọ amụma" omume ya n'ọdịnihu: ọ ga-anọ n'ọnọdụ? Ọ ga-aga n'ụzọ anyị? Nke kachasị mkpa, ànyị nwere ike ịhazi ụgbọ elu iji zere ebe nwere oke mmiri ozuzo na mmiri ozuzo?
A na-egosi data nke radar anakọtara n'ụdị ngosi dị iche iche. Na-esote, anyị ga-akọwa akụkụ abụọ kachasị mkpa nke nhazi ụgbọ elu ma na-ezo aka na ụfọdụ ọdịnaya ndị ọzọ A na-ewepụtakwa ha site na nha radar Doppler.
Dị ka ị na-ahụ, radar oké ifufe bara ezigbo uru maka ịkọ ihu igwe ma nwee ike inyere anyị aka na nhazi ụgbọ elu. Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu banyere radar ifufe na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oké ifufe radar
Ọdọ mmiri Michigan